Iiyunifomu zomkhosi - Okunye
Isinxibo esahlukileyo sokulandela ishishini ledabi siyinxalenye yongquzulwano ngezixhobo kuyo yonke indawo kwihlabathi ukusukela oko umntu wasungula imfazwe. Ukuphatha iingalo zombini, okuhlaselayo nokuzikhusela (imikhonto, iiklabhu, amakhaka, iminqwazi, njl.), Inika igorha imbonakalo eyahlukileyo komnye umntu owenza imisebenzi yoxolo. Nangona kunjalo, uluvo lweyunifomu yasemkhosini, ukunxiba onke amalungu eyunithi enxibe ngokufanayo, luphuhliso olucothayo kwimbali ende yongquzulwano lomntu.
I-Yeoman yaseLondon yoLondolozo
Ndingayinika inja yam aspirin yenja yam
Kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, abasemagunyeni abancinci okanye abaphezulu kunye nabaphathi bemfazwe basebenzise inxenye yobutyebi babo ukunxiba imizimba yoonogada benxibe ngendlela efanayo neyokuba abanye abakhonzi ebhotwe banokunxiba uhlobo oluthile lobuxoki. Olu hlobo lweeyunifomu zakudala luyasinda kwisinxibo somsitho wooGadi bePopu baseRoma (ngokwentsomi, eyilwe nguMichelangelo) kunye neYeomen of the Guard yaseLondon, iyunifomu yayo efana naleyo inxitywa kwiinkundla zaseTudors. Iyunifomu yasemkhosini yokwenyani, nangona kunjalo, yaqala ukusetyenziswa kunye nentuthuko kwezopolitiko eYurophu esele zibizwa ngokuba 'ngumkhosi wezomkhosi.'
Uvukelo lomkhosi lwenzeka ngasekupheleni kwenkulungwane yeshumi elinesithandathu nasekuqaleni kwekhulu leshumi elinesixhenxe, njengoko umlilo we-musketry ovela kulwakhiwo lobuninzi waba sisigqibo kumabala emfazwe aseYurophu. Ngelixa i-musket nganye yayisisixhobo esingasebenziyo, xa isetyenziswa yimikhosi eqeqeshwe kakuhle kwaye eqeqeshwe kakuhle, i-musket yavumela ukuhamba kwabantu abaxhobileyo ukulawula naliphi na idabi. Olu tshintsho lwezixhobo lukhokelele ekubumbeni umbutho wezomkhosi kwimikhosi yobungcali ebandakanya inqanaba eliqeqeshwe kakhulu kunye namajoni efayile ahlelwe kwimibutho esisigxina. Ekuqaleni ezi yunithi zakhuliswa ngabantu abathengisa iinkonzo zabo kwelona bhidi liphezulu. Umphathi weyunithi emva koko wanikezela ngempahla kwimikhosi yakhe; umdla woqoqosho kunye nokwakha I-esprit de Corps kukhokelele ekufaneni kwempahla kwezi yunithi.
Umba obalulekileyo wokulwa kukukwazi ukwahlula umhlobo kulutshaba. Phambi kolawulo lwebala ledabi ngompu oku kungenziwa ngokusetyenziswa kwemigangatho okanye iiflegi (ezinjengokhozi loMkhosi wamaRoma) okanye izixhobo zokuchonga okwethutyana (isikhafu okanye iiarmbands) ezivumela icala elinye ukuba livume amahlakani alo. Nangona kunjalo, ukubakho kweempazamo ezibulalayo kwiyunithi yokuchongwa kwakukukhulu kumlo wedabi wenkulungwane yeshumi elinesixhenxe- kunye nasekuqaleni kwenkulungwane yeshumi elinesibhozo egutyungelwe ngumsi ovela kwiivolleys ezigxothwe kwizixhobo zomgubo omnyama. Kwaneeflegi zazingancedi kangako njengoko ezi zihlala zihonjiswe ngebheji yomlawuli weyunithi kunokuba ibe sisimboli yelizwe.
Oku kukhokelele ekusasazeni ukufana kwengubo engaphaya kwenqanaba lomkhosi ukuya kwelona lomkhosi omkhulu wobukumkani okanye welizwe. Njengokusekwa kwezomkhosi ngokusisigxina eYurophu, ukwenziwa komgaqo ofanayo kuyo yonke imikhosi kwinkonzo karhulumente kuye kwamkelwa. Phakathi kwinkulungwane yeshumi elinesibhozo imibala yempahla yayiye yanxulunyaniswa nemikhosi yesizwe. I-Bhritane yambathisa umkhosi wayo ngombala obomvu, i-France ngombala ongwevu okanye omhlophe, i-Prussia ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, i-Bavaria kwisibhakabhaka esibhakabhaka, i-Austria emhlophe, i-Russia ngombala oluhlaza, njlnjl. Imikhosi yasemzini kwinkonzo yeenkosi zaseFrance, umzekelo, zihlala zinxiba bomvu okanye luhlaza okwesibhakabhaka. Ukulandela iziganeko zowe-1789 iRiphabhlikhi entsha yaseFrance yatshintsha umbala weyunifomu yabaseFransi ukuba babe luhlaza.
Ngamanye amaxesha umbala ofanayo wawunokubaluleka kokuwela imida yelizwe. Zombini i-Bhritane ne-France zazinxibe oombayimbayi bazo ngombala oluhlaza. Imijukujelwa yemipu yaseJamani neyaseBritani yambathiswa ngombala oluhlaza kakhulu. Iiyunifomu zomkhosi waselwandle kwihlabathi liphela ibiyeyombala we-navy blue (emhlophe ehlotyeni) kwaye kutshanje imikhosi yomoya yehlabathi inxibe iyunifomu yelokhwe eluhlaza okwesibhakabhaka.
Imigaqo eSisiseko yokuNxiba eMkhosini
UJames Laver ubone imigaqo emithathu ekhuphisanayo emisela uhlobo lweeyunifomu zomkhosi. Wazibiza ngokuba ngumgaqo wolawulo, umgaqo wokuhenda, kunye nomgaqo wokusebenziseka. Umgaqo wokuziphatha uzibonakalisa ngokwahlula ngokwamaqela ngaphakathi kwintlangano yezomkhosi kunye nokwahlula ama-elite kumajoni aqhelekileyo. Yiyo loo nto okoko ngo-1831, oonogada beenyawo kumkhosi wase-Bhritane banxibe isithsaba seebhere esizahlulahlula kwiirejimeni zabakhweli. Oku kukwabonisa nomgaqo wokukhohlisa, kuba isigqubuthelo sentloko sonyusa ukuphakama kwalowo usinxibileyo, yiyo loo nto simenza abe ngamadoda ngakumbi kwaye abe nomtsalane. U-Laver uphikisa ukuba umthetho-siseko kunye nomgaqo wokulukuhla uzibonakalise ngamaxesha oxolo; Nangona kunjalo, zozibini zivelisa uhlobo lwengubo oluhlala lungenakwenzeka ebusweni bobunzima bephulo. Ngamaxesha emfazwe, iibheji zenqanaba zinokukhutshwa ngenxa yokuba zitsala umlilo wotshaba, ezibonisa ukuphumelela komgaqo wokusebenziseka ngaphezulu komgaqo wolawulo. Kwangokunjalo, umgaqo wokulukuhla uvelisa into elungeleleneyo, 'iyunifom' yomfaniswano womhlaba womngcelele uthathelwa indawo yingubo evulekileyo evumela ukuba kube lula ukuhamba okufunekayo emfazweni.
Iiyunifomu zomsebenzi ngeMbali
Apho unokuthenga iiyunifomu zemfazwe zamakhaya
Ngelixa umthetho -mgaqo ophetheyo unyanzelisa ukuba iiyunithi ezikhethekileyo zahlule isinxibo sazo kwiiyunithi zomkhosi oqhelekileyo, ikwakhona into yokuba kubonakala ngathi phantse kuyo yonke indawo ukuba abanye ukuba banikwe ithuba baya kufaneleka iisimboli zodidi oluphezulu. Iibhutsi zokutsiba kwee-paratroops zaseMelika kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi zazingumqondiso wokuzingca, kodwa kamva emfazweni zehliswa njengophawu lobume njengamanye amajoni, nkqu nalawo angabandakanyekanga emfazweni.
IiHussars zaseHungary kwixesha lokunxiba
Kuyinyani ukuba umkhosi welinye ilizwe uya kwamkela isinxibo somkhosi welo lizwe ogqalwa njengamandla aphezulu emkhosini. Ukutyhubela imbali ilizwe elinye okanye elinye belilawula isimbo somkhosi, abanye bekopa iifom zabo. Isitayile somkhosi waseFrance salawula iyunifom yomkhosi omkhulu wehlabathi de yoyiswa kwimfazwe yaseFranco-Prussian; emva koko imikhosi kwihlabathi liphela yatshintsha ii-kepis zazo zaseFransi yabeka iminqwazi yokuthwala yaseJamani. Kananjalo, iiyunithi ezinqwenela ukuba kwinqanaba elifanayo elite ziya kuba nenkawu yokunxiba kwabanye abantu abakhethekileyo. Kwimikhosi emininzi yehlabathi i-beret eluhlaza iye yanxulunyaniswa namaqela e-elite commando, i-beret ebomvu kunye nemikhosi yomoya, kunye ne-beret emnyama kunye nemikhosi exhobileyo. KwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, umphathi-mkhosi wase-Bhritane u-Bernard Montgomery kunye namadoda e-Royal Tank Corps babenxibe i-beret ezimnyama, njengama-Jamani e-Panzers awayesilwa entlango ye-North Africa. Kwiinkulungwane ezidlulileyo abakhweli bamahashe abakhanyayo kwihlabathi liphela bamkele ibhatyi ebotshelelwe kakhulu ye-hussar yaseHungary okanye emile okwesikwere ikepusi Isigqubuthelo sentloko seseLoland.
Ukuvela kweYunifomu yasemkhosini
Ngendlela esikiweyo kunye neqhelekileyo, iyunifomu yasemkhosini ibonisa isimbo sefashoni yexesha labo, nangona izinto ezahlukileyo, ezinje ngeepaulets kunye neentloko, zongezwa ngokucacileyo ukuba zinxiba lowo ulijoni. Emva kokuba isikrweqe somzimba saqala ukungasetyenziswa phakathi kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe, ijoni lalinxibe njengomza wakhe, nangona imibala yempahla yakhe yayiya kubonisa iyunithi yakhe kwaye eqhubeka ngokwaseburhulumenteni. Imfuneko yokuthwala iingalo ngamabhanti anokukwazi ukuphatha iingxowa zeembumbulu, izixhobo zokulwa, amakrele nokunye okunjalo kulinike ijoni imbonakalo eyahlukileyo.
Ikepusi yegrenadier yaseRussia
Kwanakweli nqanaba lakuqala kwiyunifomu yomkhosi yohlobo oluthile lomnqwazi wasentloko, isiciko se-grenadier. Ngexesha lokugqibela kwenkulungwane yeshumi elinesixhenxe, i-grenade yayiyeyona nto ibalulekileyo kumaqhinga okuhamba. Yayiyintsimbi yentsimbi ezaliswe ngumlilo owawutshiswa yifuse. Imikhosi yeengcali yaqeqeshelwa ukukhanyisa ezi fusisi kwimidlalo ebanjwe ngesandla emva koko yaphosa iziqhushumbisi kuluhlu lotshaba. Kuba kwakufuneka izandla zozibini koku, iigrenadier kwafuneka zirhole imiski yazo emqolo, umsebenzi ekunzima ukuwenza xa benxibe iminqwazi ebanzi yexesha. Yiyo ke loo nto iigrenadier zanikwa uhlobo lwesitokhwe sokugcina impahla. Omnye umthungi wasemkhosini wagqiba kwelokuba ezi grenadiers, esele zikhethelwe ubungakanani kunye namandla, ziya kujongeka zinomtsalane ngakumbi ukuba ikepusi ibiqinisiwe ukwandisa ukuphakama okubonakalayo kwalowo uyinxibileyo (umgaqo wokulahlekisa iLaver). Isigqubuthelo se-grenadier saba ngumqondiso wejoni elite (umgaqo-nkqubo weLaver's hierarchical). Kuba amajoni aphakamileyo ayeluncedo ekuhlaseleni okanye ekukhuseleni izikhundla eziphambili kwibala lemfazwe, imikhosi yaseYurophu yaqhubeka ichonga iiyunithi njenge 'grenadiers,' kwaye ezi zazinxiba iminqwazi ye-grenadier kwakude kudala emva kokuba iziqhushumbisi zingasasebenzi. Mna). Ikepisi ye-grenadier ngamanye amaxesha yayinikwa umphambili wentsimbi (njengaleyo yayinxitywa yiRussian Lifeguard Pavlovski Regiment inxibe ngokuzeleyo kude kube ngo-1914) okanye yenziwe ngoboya. Isigqubuthelo sentloko esinebhulukhwe enxitywa yiBrigade yaBalindi kwiNdlu yaseBuck-ingham eLondon eneneni ikepusi yegrenadier.
Ijoni elinamahashe ngamanye amaxesha lalihlulwa kubemi abakhweleyo ngokunxiba i-cuirass. Esi sikrweqe somzimba saqhubeka sisetyenziswa ngabakhweli bamahashe abade emva kokuba abantwana abalahliweyo besishiyile. Umnqwazi waseburhulumenteni wawunxitywe ixesha elide, ngaphandle kokuqhuma kwawo entloko xa ubambe ityala. Olu tyekelo ekugqibeleni lwakhokelela ekubeni umnqwazi ogqityiweyo uthatyathelwe indawo zizigcina-ntloko zeentlobo ezahlukeneyo ngasekupheleni kwenkulungwane yeshumi elinesibhozo. Isiseko kwezi helmethi sasebenza kumgaqo wokukhohlisa kunye nomgaqo wokusebenziseka, kuba ukongeza ekwenzeni umkhweli wehashe ukuba anyanzelise ngakumbi, inika ukhuseleko olongezelelekileyo ekusikeni ikrele.
Yayikukuqeshwa kwakhona kwabakhweli bamahashe abakhanyayo abavela kwimida esempuma yeYurophu ababonelela ngenoveli kunye nokubonakala okungaqhelekanga kwinxalenye enkulu yabakhweli bamahashe kwimikhosi yaseYurophu yenkulungwane yeshumi elinesibhozo neyeshumi elinesithoba. I-Austria yaqala yaqesha abakhweli-mahashe baseHungary ukuba basebenze njengehashe elikhanyayo kwindawo yalo yomkhosi. Ukunxitywa kwala mahashe aseHungary kwaba nempembelelo enkulu kwisitayile somkhosi, kokubini kwimikhosi ekhwele kunye namajoni. Imikhosi emininzi yayikopa ukubonakala kwebhatyi yaseHungary ebotshelelwe yimigca emininzi yeentambo kunye neetoggs ezinqamleze isifuba. Ibhatyi yesibini, enoboya (i-pelisse) ebotshelelwe egxalabeni lasekhohlo nayo yamkelwa ngokubanzi kwilokhwe yamahashe akhanyayo, njenge sabretache, ingxowa yesikhumba okanye imvulophu eyayinqunyanyisiwe kwibhanti lekrele.
Sisigqubuthelo sentloko saseHungary esinefuthe elikhulu kwinkangeleko yomkhosi. Aba bakhweli bamahashe babenxiba ikepusi yokugcina impahla enamacala oboya okanye ityesi yovalo yesilinda. Ngalo lonke ixesha uboya obukwikhaphethi yesitokhwe bandisiwe, besenza isilinda soboya ngengxowa ewela kwelinye icala ukusuka phezulu, uhlobo lwesigqubuthelo sentloko esaziwa njengebhasi. Isilinda esaziva ikepusi yayiyinkuthazo ye-shako. I-shako yamkelwa ngokubanzi kuwo onke amasebe omkhosi ngexesha leMfazwe kaNapoleon. I-Bhritane yanxiba oohlohlesana bayo kwii-shako ngo-1800; Kwakungekho ngo-1806 apho umgca ohamba ngeenyawo waseFransi waseNapoleon wamkela le ntloko. I-shako yaqhubeka njengeyona ndlela ixhaphakileyo yentloko yasemkhosini de kwahlulwa iFrance yiPrussia ngo-1870 kwaye iyaqhubeka ukunxitywa ngamanye amacandelo (njengoko, umzekelo, kwisinxibo esipheleleyo seCorps of Cadets yeUS Military Academy).
Kanye njengokuba iHungary ibonelele ngephethini yokunxiba ii-hussars kwimikhosi ejikeleze umhlaba, iPoland yanikezela ngemodeli yokunxiba kwe-lancers, ngakumbi emva kokuba iiPolesi zidlale indima ebonakalayo kwimikhosi eyahlukeneyo yeNapoleon. Isikwere-siphezulu ikepusi kwaye ibhatyi engaphambili yeplastron okanye ityhubhu enemibhobho ecaleni kwemigca yayo yayinxitywa ngamacandelo amaninzi abakhweli bamahashe eYurophu kwaye yayinefuthe kwiyunifomu ye-India yobukoloniyali.
Ekuqwalaseleni uxinzelelo lokwandiswa kweeyunifomu zomkhosi kunye noxinzelelo lokuchasana nokusetyenziswa, umntu unokuthelekisa amava aseYurophu kwiiMfazwe zikaNapoleon kunye nexesha elide loxolo olulandele olo ngquzulwano. Ngelixa kwithiyori imikhosi ebisiliwa kwiiMfazwe zikaNapoleon yayineeyunifomu ezimibalabala nezicacisiweyo, ngokwenza oko zazisa imbonakalo yedrabha. Iiyunifomu zacima elangeni okanye zanxitywa kwimikhankaso emide zaza zathatyathelwa indawo yimpahla efumaneka ekuhlaleni. Ubunzima bephulo lasebusika linyanzelise imikhosi ukuba imashe ngeengubo ezingwevu okanye ezimdaka endaweni yokunxiba ngokupheleleyo. Iziqwenga zazibekwa ngoobhaka, ngelixa ii-shakos okanye iibhonethi zesikhumba zeebhere zikhuselwa kwimozulu ngezimbozo zesikhumba seoyile. Iibhulukhwe ezikhululekileyo zatshintsha ii-breech eziqinileyo kunye ne-spatterdashes okanye ama-gaiters omhlaba okroliweyo. Ngokuza kwexesha elide loxolo kulandela ukoyiswa kukaNapoleon, ukubonakala kumhlaba womngcelele kwafudukela ngaphambili kwaye iyunifomu yafikelela kwinqanaba lokucaciswa okumangalisayo okungazange kubonwe ngaphambili okanye ukusukela oko. Iinyani zemfazwe zabuya emva kwexesha kwinkulungwane yeshumi elinesithoba nasekuqaleni kwamashumi amabini ukuphelisa ubungangamsha obunjalo kubomi bemikhosi.
Ukubonakalisa utshintsho kwifashoni yoluntu, phakathi kwinkulungwane yeshumi elinethoba isinxibo esomeleleyo esinqeni, esinxitywe ngokubanzi phantse iminyaka engamashumi amahlanu, sathatyathwa endaweni yomkhosi wehlabathi yingubo okanye idyasi eneziketi ezazigqume kancinci ithanga. I-Russia kunye ne-Prussia zaye zamkela iminqwazi yesikhumba nge-spikes zethusi, ngelixa uninzi lwehlabathi liqhubeka nokunxiba i-shako okanye i-kepi. Ngeli xesha linye kwabakho inkqubela kwitekhnoloji yemipu eyakhokelela kuguquko kwiyunifomu yasemkhosini.
Phantse kwiinkulungwane ezintathu i-musket egudileyo yayilawula idabi. Uluhlu olusebenzayo lwesi sixhobo lwalufutshane kakhulu (ikhulu leeyadi okanye ngaphantsi) kangangokuba amajoni ayegrunjelwe ukuba angacimi ade abone abamhlophe ngamehlo otshaba lwabo. Yiyo loo nto umbala weyunifomu wawungabalulekanga ukuba nje umntu wayenokwamkelwa ngoogxa bakhe kwaye angathathelwa lutshaba. Ngelixa bekukho ukusetyenziswa okuthile kwidabi lemipu enemiphanda eqokelelweyo eyayisebenza kumgama omde kakhulu, le mipu yokuqala yayinzima ukuyilayisha. Ukuyilwa kwakamsinya ngaphambi kweMfazwe yamakhaya yaseMelika yombayimbayi, eyayinokulayishwa ngokukhawuleza njenge-musket endala egudileyo, yalandelwa kwangoko kukwenziwa kompu wokulayisha. Enye into entsha yayiyimipu yemagazini eyayivumela umntu ohamba ngeenyawo ukuba adubule kaninzi emva kwesenzo esinye sokulayisha isixhobo. Umgubo ongenamsi uphelise amafu amakhulu omsi obusithelisa umbono kwibala lomgubo omnyama. Zonke ezi zinto zikhokelele ekwamkelweni kweeyunifomu ezinjongo zazo ikukuthintela ukwamkelwa kwemikhosi kwimigama emide apho babesengozini yemipu.
IKhaki yaqala ukusetyenziswa e-Indiya, ekuqaleni kwi-Corps of Guides eyaphakanyiswa ngu-Lieutenant Harry B. Lumsden ngo-1846. Kwiminyaka elishumi kamva, ngexesha le-Indian Mutiny, iirejimeni ezininzi zase-Bhritane zadaya iyunifomu yazo emhlophe zasehlotyeni ukuze zingabonakali kumabala emfazwe. . Ngelixa i-Bhritane yazama eminye imibala ye-drab, ngakumbi engwevu, i-khaki yayinxitywe e-India, yaba sisinxibo esisemthethweni kweso sikhululo ngo-1885 nakuzo zonke izikhululo zangaphandle ngo-1896. Ngo-1902 i-Bhritane yamkela ilokhwe yenkonzo ye-khaki. Amanye amazwe alandela umzekelo waseBritane; Abathathu bokuqala ukwamkela ilokhwe yenkonzo ye-khaki yayiyi-United States, i-Japan kunye ne-Imperial Russia. Omabini la mazwe eFrance nase-Jamani basebenzisa i-khaki kwimikhosi yabo yobukoloniyali, kodwa i-Jamani ngo-1910 bakhetha u-grey okhanyayo kumkhosi wabo oqhelekileyo kunye nase France, ngelixa yayiqala iMfazwe Enkulu isanxibe iyunifomu eblowu emnyama, yatshintshela kwimbonakalo eluhlaza okwesibhakabhaka ekuqaleni kuka-1915.
Imfazwe yeHlabathi yokuQala yaseJamani
Umlo wemfazwe ka-1914 ukuya ku-1918 wakhokelela ekwamkelweni kwezigqoko zentsimbi kwindalo iphela. Isoyikiso sokuhlaselwa kwegesi kwakuthetha ukuba iimaski zerhasi kufuneka zifikeleleke ngokulula. Imisele, ucingo oluhlabayo, kunye nompu womatshini wanciphisa abakhweli bamahashe ukuba bangabinandima kwaphela. Ukwanda koomatshini kwakuthetha ukuba oomatshini abazenzekelayo bathathe indawo ye-farrier ekugcineni imigca yokubonelela isebenza, kwaye ubuncinci umgxeki wezinto zangoku ezinxibe iyunifomu ukhale ngelithi isinxibo sejoni ngoku silinganisa nesomsebenzi wesikhululo senkonzo. Imfazwe yatshintsha umbono wamajoni afanelekileyo ukusuka kwiyunithi enxibe kakuhle kwaye enemibala eqhuba ngokuchanekileyo kumhlaba wokumisela ukuya kwimikhosi emikhulu ebandakanyeka kwimfazwe eyoyikekayo phantsi kweemeko ezoyikisayo zemfazwe yanamhlanje. Ubungangamsha nobungangamsha bamaphepha ezomkhosi kunye nozuko lwengubo epheleleyo ebonwa ngaphambi kwemfazwe (emva kwexesha lowe-1913 umkhosi waseJamani wawuqhuba ngendlela yenguqu epheleleyo) wemka ngonaphakade.
Iimfazwe ezalandela emva kweminyaka yowe-1914 ukuya kowe-1918 zibone iyunifom yokulwa iya isanda, nangobunkunkqele obukhulu, iyilelwe ukuthintela ukuba ijoni lingabonwa kunokuba livumele imbonakalo entle ukuba yoyikise okanye yoyike utshaba. I-Khaki kunye ne-olive drab zithathelwe indawo 'yingubo ephazamisayo' impahla yokufihla ngokukuko indoda elwayo okanye ibhinqa. Iiyunifomu ziyilelwe kwanokufihla ijoni kwizixhobo zombono wobusuku zifumana ukusetyenziswa okwandayo kumabala emfazwe. Ukuqaqamba okumbala, amacandelo okwahlula amajoni kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ancitshisiwe emkhosini waseMelika waba mnyama kwi-drab yomnquma. Ukugxininiswa okwandayo kokufihla kuye kwanyanzelisa ixabiso, nangona kunjalo, njengoko 'umlilo onobuhlobo' ngamanye amaxesha ungqineke uyingozi kwimikhosi ebandakanyeka kwimikhosi yezomkhosi njengomlilo ovela kutshaba olutshabalalisiweyo olugqitywe lixesha elide lokuqhushumisa ngenqwelomoya nakwimikhosi.
Kukwakho nogxininiso ekuzameni ukukhusela ijoni emfazweni. Itekhnoloji yale mihla ivelise isikrweqe somzimba esincinci, 'iibhatyi ezinqabileyo,' ukukhusela umzimba. Amanye amazwe aneesuti, kodwa azikabekwa kwimeko yokulwa, ukuze ijoni likwazi ukulwa edabini elingcoliswe zizixhobo zenyukliya okanye zekhemikhali.
Umsitho usadlala indima kulwalamano lomkhosi kurhulumente, kwaye ukunxiba okufanelekileyo kule ndima yomnyhadala kusabalulekile kwiindawo ezininzi zomkhosi. Nangona kwiimeko ezimbalwa, njengaseBritish Brigade of Guards kunye ne-US Marine Corps, iyunifomu engatshintshiyo kwangaphambi kowe-1914 isinxibo esipheleleyo iyasetyenziswa, uninzi lomkhosi wehlabathi uqhuba imisebenzi yomsitho kwimpahla yokunxiba ngakumbi. Nangona uqoqosho luhlala lukhankanywa njengesizathu sokushiya iyunifomu enxibe ngokupheleleyo, iinxalenye ezinkulu zemikhosi zisebenzisa i-odolo yokunxiba parade enokuthi ibonakalise ngokulula iiyunifomu zokunxiba ezipheleleyo. Yifashoni yale mihla eyalela ukuba ijoni langoku lenze umngcelele wekhaki okanye umthunzi ofanayo. Ukanti kuninzi lwemibutho yezomkhosi kusekho uxinzelelo lokubonisa ukubonakala 'kobuqili' kwiparade. Ngamanye amaxesha, isinxibo sokulwa sangoku sisetyenziselwa ukongeza izinto zomthendeleko. Imikhosi yaseFrance yamanye amazwe ibhengeza ukunxiba iimpahla zokulwa kunye nokongezwa kweebhanti ezimhlophe ezingenachaphaza (kunye neplastiki) kunye ne-epaulets yesiqhelo eluhlaza nebomvu kunye ne-kepi emhlophe eqala ngenkulungwane yeshumi elinesithoba. Ukudala ilokhwe ijoni kusekho ngaphezulu kokulula.
Bona kwakho Zixhobo; Ingubo yokufihla.
UAber, uThomas S. AmaHlathi aseHinterland kunye nesinxibo somkhosi: imibuso yaseYurophu kunye neeyunifomu zangaphandle. IOxford: Berg, 1999.
UCarman, uWilliam Young. Isichazi-magama seYunifomu yasemkhosini. ILondon: iBT IBatsford, Ltd., 1977.
UJoseph, uNatan. Iiyunifomu kunye neeYunifomu: Unxibelelwano ngeMpahla. ENew York: IGreenwood, ngo-1986.
UKnötel, uRichard, uHerbert Knötel, Omnci, kunye noHerbert Sieg. Iiyunifomu zehlabathi: I-Compendium ye-Army, i-Navy kunye ne-Air Force Unifomu, ngo-1700-1937. Iguqulwe nguRonald G. Ball. INew York: Ababhali, ngo-1980. Yapapashwa ekuqaleni njenge Incwadi yesandla yezifundo ezifanayo. IHamburg: H. G. Schulz, 1937.
UJames Laver. 'Ifashoni kunye noDidi lokwahlulahlula.' Amaphepha alingwayo 1 (1945): 63-74.
-. Iiyunifomu Zomkhosi waseBritane. ILondon: IPenguin, ngo-1948.
ULawson, uCecil C. P. Imbali yeeyunifomu zomkhosi wase-Bhritane. Iivolthi ezi-5. ILondon: iKaye kunye neWadi, ngo-1940-1967.
Yiyeke, John. Ifashoni yasemkhosini: Imbali yokuThelekisa iiyunifomu zemikhosi emikhulu ukusuka kwi-17th Century ukuya kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala. ENew York: Oonyana bakaG. P. Putnam, ngo-1972.
UParker, uGeoffrey. Uvukelo Lwezomkhosi: Ukulungiswa Kwezomkhosi kunye nokunyuka kweNtshona, 1500-1800. ICambridge kunye neNew York: ICambridge University Press, ngo-1996.
Ifestile, uMartin, kunye noGerry Embleton. Isinxibo somkhosi eMntla Melika, 1665-1970. ILondon: Ian Allan, 1973.
ungahlamba ingubo yombane
Iphepha Lamaxabiso Antique Malunga Ukubhala Ukubhala Ukucoca Imiboniso Yeslides Iikati General Info Ukupeyinta Izimvo
Ikhekhe Decorating Slideshows
I-Intanethi Ukhuseleko Iimiphumo
Ubambiso Ukubuyiselwa Kwemali
yenziwe ngantoni isikhumba pu
ndingenza ntoni endaweni yeswekile yomgubo
indlela yokulahla uqalo
Ifenitshala ye-rv esetyenzisiweyo iyathengiswa ngumnini
Ungaqala njani inkampani yotyalo mali
Ukwamkela Umntwana Ongamzelanga Ibengowakho